Shabakadda Cilmi-baarista Beeralayda ee Mabda'a iyo Dhaqanka
By Joornaalka Caalamiga ah ee Joogitaanka Beeraha
Sannadkii 2013, Barnaamijka Cilmi-baarista Dalagga Iskaashatada ee McKnight Foundation wuxuu bilaabay taageerada shabakadaha cilmi-baarista beeralayda (FRNs). FRNs waxaa loo maleeyay in ay yihiin hab guud oo cilmi baaris ka qaybqaadasho isku xidhan oo looga dan leeyahay in lagu taageero xoojinta beeraha beeralayda yar yar ee toban wadan oo Afrika ah iyo gobolka Andes ee Koonfurta Ameerika. 30-ka FRN waxay cabbirkoodu ahaayeen min 15 ilaa in ka badan 2,000 oo beeraley ah.
Halkii lagu soo rogi lahaa qaab FRN adag, barnaamijku wuxuu adeegsaday mabaadi'da si uu u hago ficilka iyo milicsiga. Mabaadi'da ayaa quseeya siyaabaha loola shaqeeyo beeralayda, samaynta cilmi baarista, iyo isku xirka. Habkani waxa uu suurtageliyay in dib loo milicsado sida mabaadi'da loo fasiray, loo hirgeliyay, loona isticmaalay in lagu hago waxbarashada xaaladaha kala duwan.
Warqadani waxa ay ka warbixisaa aragtiyaha laga helay waxbarashada la fududeeyey ee 2013-2019 oo ay diiradda saartaa qaybo-hoosaadyada FRN-yada kala duwan. 30ka FRN ee la taageeray, afar ka mid ah ayaa si qoto dheer loo falanqeeyay, warbixinada iyo waraysiyada ayaa lagu falanqeeyay 16, sahanna waxaa loo sameeyay 21. Ku tiirsanaanta mabaadi'da halkii ay ka ahaan lahayd qaab hawleed ayaa u ogolaatay codsigooda horumarka ah, habka ka qaybqaadashada, ka qaybgalka beeralayda. , raasamaal urureed, kalsooni, iyo shabakado ayaa la dhisay. Wax kasta oo cad oo la dhimay iyo isku xidhnaantu waxay u egtahay in ay ka miisaan weyn tahay la qabsiga macnaha guud iyo hal-abuurka ka dhashay.
Nooc garaaf ah oo ka mid ah qoraalka la taaban karo ee maqaalka oo ay abuureen qorayaashiisa. Guji si aad u ballaariso